08.10.2018 12:39 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် အမြတ်အစွန်းအခွင့်အရေး အများအပြားရှိပါသည်။
12.10.2018 12:47 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်
usd forex ကုနျသှယျ gbp eur nzd cad aud
29.10.2018 11:21 အပတ်စဉ် Forex သုံးသပ်ချက်: အောက်တိုဘာ ၂၉-နိုဝင်ဘာ ၂
ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး အရောင်းအဝယ်အခွင့်အလမ်းများအား သိပြီး၊ အဓိကဈေးကွက်သက်ရောက်မှု ရှာဖွေချင်ပါသလား? Forex ဈေးကွက်အား ဘယ်ကိန်းဂဏန်းများက မောင်းနှင်သနည်း? ယခုအပတ်အတွက် FBS အဖွဲ့မှ ဈေးကွက်သုံးသပ်ချက်အား ကြည့်ပါ!
05.11.2018 13:08 EUR/USD ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ -5Novermber 2018
EUR/USD ဆန်းစစ်ချက်နှင့် ခန့်မှန်းချက်များ -5Novermber 2018 EUR/USD daily chart တွင် Double bottom pattern တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေပါသည် …
usd eur forex signals အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း forex exchange